मन्त्रिपरिषद् विस्तार आज, को-को हुँदैछन् मन्त्री ? – Everest Times News
मन्त्रिपरिषद् विस्तार आज, को-को हुँदैछन् मन्त्री ?
माओवादीले मन्त्रीको नाम टुंग्याए पनि सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रबाट गिरिराजमणि पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही, आशा खनाल, टेकबहादुर बस्नेत, सीता नेपालीलगायतको नाम मन्त्रीको लिस्टमा समावेश भएको चर्चा छ। फोरम लोकतान्त्रिकले भने यसअघि नै मन्त्री भएका जितेन्द्र देव र गोपाल दहितलाई पठाउने भएको छ। कांग्रेसबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट ६ र लोकतान्त्रिक फोरमबाट २ समेत गरी सोमबार १८ मन्त्री थप गर्ने तयारी देउवाले गरेका छन्। कान्तिपुरमा दैनिकमा खबर छ ।